अमेरिकी ओपनको महिला फाइनलमा ओशाका र विक्टोरिया – Nepali Digital Newspaper
नहरमा मृत भेटिए अस्पतालका कर्मचारी
नगर अस्पताल बनाउदै वीरेन्द्रनगर
परम्परागत खाद्य पुनःस्थापन र ऋषि-खेतीमा नफर्की सुख्खै छैन !
सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने दायित्व हाम्रो काँधमा : राष्ट्रपति
अमेरिकी ओपनको महिला फाइनलमा ओशाका र विक्टोरिया
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 1 week ago September 11, 2020
अमेरिकी ओपन २०२० को महिलातर्फ जापानकी नाओमी ओशाका र बेलारुसकी विक्टोरिया अजारेन्का फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
दुई पटककी ग्य्राण्डस्लैम च्याम्पियन ओशाकाले सेमिफाइनलमा अमेरिकी खेलाडी जेनिफर ब्रैडीलाई तीन सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेकी हुन् । ओशाकाले ब्रैडीलाई ७–६, ३–६ र ६–३ सेटको अन्तरमा पराजित गरेकी हुन् ।
त्यस्तै पूर्व नम्बर एक खेलाडी विक्टोरियाले अर्की पूर्व नम्बर एक तथा हाल बरियता क्रममा तेस्रो स्थानमा रहेकी सेरेना विलियम्सलाई संघर्षमय खेलमा तीन सेटमा पराजित गरेर फाइनलमा प्रवेश गरेकी हुन् । विक्टोरियाले सेरेनालाई १–६, ६–३ र ६–३ सेटको अन्तरमा पराजित गरेकी हुन् ।
अब चौथो वरियता प्राप्त ओशाका र विक्टोरियाको बीचमा फाइनल खेल हुनेछ । अजारेन्का २०१३ पछि पहिलो पटक ग्य्राण्डस्लैमको फाइनलमा पुगेकी हुन् । ओशाका तीन सालको अन्तरमा दोश्रो पटक अमेरिकी ओपनको फाइनलमा पुगेकी हुन् । ओशाकाले २०१८ को अमेरिकी ओपनको फाइनलमा सेरेना विलियम्सलाई पराजित गरेर पहिलो पटक च्याम्पियन बनेकी थिइन् ।
पेट्रोल बोकेको ट्यांकर त्रिशूलीमा खसेर आगलागी
वायुसेवा प्रदायकहरू उत्साहित, आन्तरिक उडानको ५० प्रतिशत बुकिङ
कांग्रेस महामन्त्री कोइराला डिस्चार्ज
आइत, अशोज ४, २०७७
मानव समाजको जग पुनः बसाउने आशा